cybro 1006 days ago
Nas 1005 days ago
riddle 1005 days ago
Punter 997 days ago
Nas 997 days ago
magorkhe1 997 days ago
Punter 996 days ago
Nas 996 days ago
Punter 995 days ago
Nas 994 days ago
Punter 993 days ago
Nas 993 days ago
Punter 992 days ago
Nas 992 days ago
Nas 989 days ago
Punter 988 days ago
Visitor from US is reading पाप्राहरु ...
Visitor from US is reading आरछण को लागि आन्दोलनरत जाट हरु द्वरा दिल्ली मा पानी को नाकाब
Visitor from US is reading यसरी सम्भव छ गुमेको जमिन फिर्ता लिई The Greater Nepal बनाउन
Visitor from US is reading नयाँ नेपाल भाग १ - परिकल्पना भिडियो खिच्दा एस्त्तो देखीयो **
Visitor from US is reading Fight between Nepali and black men leads to shooting death
[VIEWED 20972 TIMES]
Posted on 10-12-16 7:11 PM [Snapshot: 1957] Reply [Subscribe]
हा हा साइब्रो !
खोइ मेरी प्यारी मर्सिले किन म देखि मन दुखाउन भएको होला .... म नै गहिरो सोचमा परेको छु ! आज साझा च्याटमा जाँदा उहाले मलाई तिरस्कार गर्नु भाको थियो ! मैले त् हमेशा उहालाई माया गरेको थिए तर आज एक्कासी उहाले यसरी मुख मोड्न भएको देखेर, मेरो मन धुरु धुरु रोको छ !
एता प्रियंका कार्कीजी गुमाउन पर्यो...... उता मेरी पनि गुमाउन पुगे !
Posted on 10-21-16 2:18 PM [Snapshot: 2924] Reply [Subscribe]
अरे यी दिपा पनि सार्है पो दुब्लायेछिंन त्, पुन्तर ब्रो ! कस्तो भोकमारी सोमाली जस्तो देखेकी ! यो दिपा त् मोटी भाकै राम्री देक्छ !
मेरी प्यारी प्रियाँकाजीको अनुहार पनि कस्तो अडबंगे आँपे आँपे देखेको दुब्लाएर, हगि पुन्तर ब्रो ? अनि पुन्तर ब्रो, के साँचीनै मेरी प्यारी प्रियाँजाजी र दिपाको लेस्बियेंन अफेर चलेकै हो र भनेको ? नेपालमा केटिहरु लेस्बियेंन सेक्स चै कसरि गर्दो रहेछ ब्रो ? यता त् केटिहरुले स्ट्राप-अँन बानेर हानेको भिडियो हेरेको ! उता चै बिचरीहरुले घरेलु आलु प्रयोग गर्छ कि के हो ब्रो ?
Posted on 10-22-16 5:34 PM [Snapshot: 3436] Reply [Subscribe]
मेरी प्यारी प्रियाँकाजी त् समलिंगी भन्न भाको होइन ? मेरो बिचारमा मेरी प्यारी प्रियाँकाजीले अब देखि कुनै पनि केटाहरुलाइ खान दिन हुँदैन जस्तो लाग्छ पुन्तर ब्रो !
पुन्तर ब्रो ! मेरी प्यारी प्रियाँकाजी एक्कासी एउटा नर्मल आइमाई बाट कसरि समलिंगी बन्न पुग्न भयो भनेर म रात भरि सुत्न सकेको थिएँन ! एसो सोचे..... के वहाको भुतपुर्बले वहाको यौन काम वासानाको आगोलाइ मेटाउन नसकेको भएर हो कि वा दाइनिङ्ग टेबलमा सेक्स गर्दा वहा खस्न भएर भेजामा शक् लागेर समलिंगी बन्न भाको हो भन्ने कुरो को गहिरो रिसर्च गरे बापत के पत्ता लगाए भने, खासमा कुनै पनि केटिहरु "स्ट्रेट" हुँदैनन् रे ! कि त् उनीहरु "बाइसेक्सुअल" हुन्छन रे कि त् लेस्बियेंन हुन्छन रे पुन्तर ब्रो ! अनि केटिहरुलाइ नाङ्गो केटिको तस्विर देखाउदा वा केटि केटि सेक्स गरेको भिडियो देखाउदा उनीहरु एक दम उत्तेजित र उत्श्रींखल भएर स्खलन हुन् पुग्छिन रे ! बैज्ञानिकले नै भनेको छ यो तथ्यको बारे !
तेही भएर म ढुक्क भाको छु र मैले मेरी प्यारी प्रियाँकाजीलाइ एउटी समलिंगी आइमाई भएता पनि मेरो हृदयबाट उहाको लागि मेरो माया कम भाको छैन !
"Our research shows that, when it comes to what turns them on they are usually bisexual or gay, but never totally straight". - Dr Gerulf Rieger from the University of Essex, UK
Posted on 10-24-16 2:30 PM [Snapshot: 4042] Reply [Subscribe]
पुन्तर ब्रो ... अनि मेरी प्यारी प्रियाँकाजीले अरु केटिहरुसंग अफेर लदाउनु हुँदा आरिश लाग्दैन ?
Posted on 10-25-16 10:19 AM [Snapshot: 4339] Reply [Subscribe]
राम्रो लाग्छ पुन्तर ब्रो ! पुन्तर ब्रो ... वहाले भू.पुसंग दाइनिङ्ग टेबल र कल्जेटमा सेक्स गर्न भाको कुरो हामीलाई भन्नु भाको थियो .... के तपाईको बिचारमा वहाले शावरमा लेस्बियन सेक्स गर्न भैसक्यो होला ?
Posted on 10-25-16 5:09 PM [Snapshot: 4449] Reply [Subscribe]
छि छि छि पुन्तर ब्रो ! बिचरी मेरी प्यारी भाउजु तेस्तो असित्ति आइमाई होइन पुन्तर ब्रो ! मेरी प्रियाँकाजी प्रतिको मेरी प्यारी भाउजुको प्रेम एक दम स्वच्छ छ .... तेस्तो लेस्बियेंन जस्तो खाते लभ होइन पुन्तर ब्रो ! वहाले प्रियंकाजीलाइ आफ्नी दिदि झैँ प्रेम गर्नहुन्छ पुन्तर ब्रो ! तर त्यो दिपा त् हेर्दै चण्डालनि जस्तै देक्छिंन ! तेसैले मेरी प्यारी प्रियाँकाजीलाइ लेस्बियेंन लभ दिपाले नै लड़ाउन्छ जस्तो छ पुन्तर ब्रो !
Posted on 10-26-16 12:39 PM [Snapshot: 4629] Reply [Subscribe]
"दीपा को माल त खतरा छ"
पुन्तर ब्रो दिपाको दन्ते "माल" छ कि के हो !!!
Posted on 10-27-16 11:27 AM [Snapshot: 4834] Reply [Subscribe]
हा हा पुन्तर ब्रो !
अनि पुन्तर ब्रो तपाईलाइ लेस्बियेंन केटिहरु मन पर्छ ? यो मेरो गाउको क्लबमा लेस्बियेंन जोडीहरु खुब औन्छांन ! अनि उनीहरुको राम्री लेस्बियेंन पार्टनरसंग डान्स गर्न खोज्यो कि कस्तो जेलस हुन्छन भने तिनीहरु ... छुन पनि दिंदैन उनीहरुको गर्लफ्रेनलाइ ! सार्है पसेसिभ हुने क्या ! तपाईको बिचारमा मेरी प्यारी प्रियाँकाजीको लेस्बियेंन लभर जेलस केटि होलिन ?
Posted on 10-29-16 2:50 PM [Snapshot: 5082] Reply [Subscribe]